म चीनको हुबेई प्रान्तमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत विद्यार्थी हुँ । तपाईंहरु (नेपालमा रहेकाहरु) सँग विनम्र अनुरोध छ- कोरोना भाइरसको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर विचार गर्नुस् । सम्झनुस् र सम्झाउनोस् । आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको अर्थ सम्भिmनुसु र सम्झाउनोस् । जथाभावी विभिन्न तर्क-वितर्कले त्रास नफैलियोस् । नेपाल सरकारको यो कुरामा ध्यानाकर्षण होस् । चीनमा डिसेम्बरको मध्यबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस, जसले स्वास-प्रस्वास प्रणालीलाई लक्षित गर्छ, अहिले विस्तारै भाइरल हुँदै यसले ठूलो रुप लिएको छ । आजको दिनमा यो भाइरसले ७०० भन्दा धेरै ज्यान लिइसकेको छ, जसमा यही वुहान शहरका धेरै मानिसहरु परेका छन् । – सत्य तथ्य र निष्पक्ष्य समाचारको लागि
म चीनको हुबेई प्रान्तमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत विद्यार्थी हुँ । तपाईंहरु (नेपालमा रहेकाहरु) सँग विनम्र अनुरोध छ- कोरोना भाइरसको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर विचार गर्नुस् । सम्झनुस् र सम्झाउनोस् । आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको अर्थ सम्भिmनुसु र सम्झाउनोस् । जथाभावी विभिन्न तर्क-वितर्कले त्रास नफैलियोस् । नेपाल सरकारको यो कुरामा ध्यानाकर्षण होस् । चीनमा डिसेम्बरको मध्यबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस, जसले स्वास-प्रस्वास प्रणालीलाई लक्षित गर्छ, अहिले विस्तारै भाइरल हुँदै यसले ठूलो रुप लिएको छ । आजको दिनमा यो भाइरसले ७०० भन्दा धेरै ज्यान लिइसकेको छ, जसमा यही वुहान शहरका धेरै मानिसहरु परेका छन् ।
म चीनको हुबेई प्रान्तमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत विद्यार्थी हुँ । तपाईंहरु (नेपालमा रहेकाहरु) सँग विनम्र अनुरोध छ- कोरोना भाइरसको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर विचार गर्नुस् । सम्झनुस् र सम्झाउनोस् । आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको अर्थ सम्भिmनुसु र सम्झाउनोस् । जथाभावी विभिन्न तर्क-वितर्कले त्रास नफैलियोस् । नेपाल सरकारको यो कुरामा ध्यानाकर्षण होस् ।
चीनमा डिसेम्बरको मध्यबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस, जसले स्वास-प्रस्वास प्रणालीलाई लक्षित गर्छ, अहिले विस्तारै भाइरल हुँदै यसले ठूलो रुप लिएको छ । आजको दिनमा यो भाइरसले ७०० भन्दा धेरै ज्यान लिइसकेको छ, जसमा यही वुहान शहरका धेरै मानिसहरु परेका छन् ।
वुहान बाहिर मर्नेको संख्या एकदम थोरै छ । यसको कारण भनेको चीनले तुरुन्त वुहानलाई लक डाउन (निषेधित क्षेत्र ) घोषणा गरेर शहरभित्रका मान्छेलाई सहर छोड्न बञ्देज लगाएको छ र संक्रमण फैलिनुबाट रोकेको हो । यसको पुरै श्रेय चीन सरकारलाई जान्छ ।
डब्ल्युएचओ र सीडीसीको विज्ञप्तिअनुसार यो पुष्टि भैसकेको छ कि यो कोरोना भाइरस चमेरोबाट मनुष्यमा सर्न सफल भएको भाइरस हो । संक्रमित मान्छेले हाछ्युँ गर्दा नजिकको हावामा फैलिने कणहरु, र संक्रमित मान्छेको नजिकको स्पर्सबाट यो भाइरस फैलन्छ । कुनै ठाउँमा दिशामा पनि यो भाइरस भेटिएको खबर छ । तर, यो रोग हावाबाट कहिल्यै फैलिन सक्दैन । किनकि, यसका किटाणुहरु हावामा बाँच्न सक्दैनन् । यो भाइरसलाई बोक्न जीवजन्तु वा मनुष्य नै चाहिन्छ ।
यो भाइरसको अवधि १४ दिन भनिएको छ । यसको अर्थ यदि एउटा स्वस्थ मानिसलाई संक्रमण भएको खण्डमा उसले लक्षणहरू देखाउन संक्रमण भएको दिन देखि १४ दिनसम्म लाग्न सक्छ । कसैले छिटो लक्षण देखाउँछन् भने कसैले ढिलो । पहिले-पहिलेका भाइरसहरु लक्षण देखिएका मान्छेहरुले मात्र फैलाउन सक्थे भने अहिले यो कोरोना भाइरस लक्षण नदेखिएको मान्छेले पनि फैलाउन सक्ने देखिएको छ ।
क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन भनेको के हो ?
कोही पनि मान्छे यदि कुनै संक्रमित ठाउँमा बस्दै आएको छ भने उसलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरिन्छ । स्वास्थ्य संस्थाले उसलाई स्वास्थ्य जाँच गरी संक्रमणको लक्षण छ कि छैन भनेर हेर्छ । लक्षणहरु नदेखिएको खण्डमा उसलाई व्यवस्थित ठाउँमा राखिन्छ, जहाँ उसको बाहिरी मान्छेहरुसँग निकट सम्पर्क नहोस् ।
उसलाई १४ दिन सम्मका लागि कडा निगरानीमा राखिन्छ । उदाहरणका लागि यदि एउटा मान्छे वुहानबाट नेपाल र्फकन्छ भने उसलाई नेपालको विमानस्थलमा स्वास्थ जाँच गरी लक्षण देखिएन भने उसलाई १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर निगरानीमा गरिन्छ ।
यदि यो १४ दिनभित्र उसमा लक्षण देखिएन भने उसलाई संक्रमण भएको छैन भन्ने पुस्टि हुन्छ र पूर्णरुपमा ढुक्क भएर समाजमा घुलमिल गर्ने अनुमति दिन सकिन्छ ।
तर, त्यो १४ दिनभित्र संक्रमणको लक्षण देखिएको खण्डमा उसलाई तुरुन्त एउटा अस्पतालमा लगिन्छ र अलग्गै वार्डमा राखिन्छ, जहाँ उसलाई कसैले छुने अनुमति हुँदैन । यसैलाई भनिन्छ आइसोलेसन ।
नेपालमा अहिलेसम्म आˆना जनतालाई आइसोलेसनमा राखेको अनुभव छैन । त्यसकारण चीनमा राखेका हामीलाई उद्धार गर्न ढिलाइ भएको बुझ्न सकिन्छ ।
नेपाली समाजमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने स्थानबारे बिरोध हुनु पनि स्वाभाविक हो । यसको कारण भनेकै आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनका बारेमा पूर्ण जानकारी नभएर हो । तर, हामीले यसबारेमा सबैले सिक्नैपर्छ र जान्नैपर्छ ।
कोरोनाको उपचारबारे जानकारी
अब कुरा गरौं कोरोनाको उपचारका बारेमा ।
नेपालीविज्ञहरु ठान्छन कि चीनले औषधि नभएका कारण मान्छे बचाउन नसकेको हो, नेपालले कसरी बचाउन सक्छ ? एउटा कुरा सबैले बुझ्न के जरुरी छ भने संसारमा यसको सटिक उपचार कसैसँग छैन ।
हाल यसको उपचार भनेको लक्षणहरु अनुसार बिरामीलाई औषधि दिनु हो । यसको अर्थ, ज्वरो आएमा सिटामोल दिने । रुघाखोकी लागेमा त्यसैअनुरुपको औषधि दिने । सास फेर्न गाह्रो भयो भने अक्सिजन दिने । निमोनिया भयो भने त्यसैअनुरुप औषधि दिने । आइसीयुमा बिरामीलाई राख्ने, र जरुरी परेको खण्डमा भेन्टिलेटरमा बिरामी राख्ने ।
के नेपालका अस्पतालहरु यो कुरामा सक्षम छैनन् र ? सबै देशमा यसरी नै उपचार भैरहेका बेला नेपाली विज्ञले यस्तो तर्क गर्नु हास्यास्पद छ ।
वुहानमा रहेका नेपालीहरुको अवस्था
अब हामी वुहान लगायत हुबेई प्रान्तमा रहेका नेपालीहरुको अवस्थाका विषयमा कुरा गरौं ।
वुहानलगायत छेउछाउमा रहेका सबै शहरहरु लक डाउन भएको आज १८ दिन भैसकेको छ । यसको अर्थ, हामीले १४ दिनको परीक्षण अवधि पार गरिसकेका छौं र हामी सबै नेपालीहरु अहिलेसम्म स्वस्थ छौं ।
हामीले आफूलाई कोठामा थुनेर राखेका छौं । समाजमा घुलमिल गरेका छैनौं । यदि कोही पनि संक्रमित भएको भए अहिलेसम्म चीन सरकारले हामीलाई आफैं अस्पतालमा लगिसकेको हुन्थ्यो । तर, हाम्रो आफ्नै सतर्कताले गर्दा कोही पनि संक्रमित भएनौं ।
यहाँ कोही पनि लुकेर बस्न सक्दैन । खानाको अभाव अहिले छैन । किनकि हामीले एकैचोटि दुई/तीन हप्ता पुग्ने गरी सामग्री जुटाएर राखेका छौं । तर, अब खाने सामाग्री त अवश्य सकिन्छ । त्यसपछि किन्न बजार जानुपर्छ । अब योबेला बजार जानु भनेको संक्रमणको जोखिम उठाउनु हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।
पानीको अभाव भने अवश्य छ । सुद्ध पानी नखाएको एक हप्ता भैसकेको छ । धारामा आउने बोरिङको पानी उमालेर पिउनु परेको छ ।
अहिले हाम्रो उद्धार गर्न जोखिमपूर्ण छैन भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझिसक्नुभयो भन्ने आश गर्दैछु । तर, अब जति ढिलो हुन्छ, त्यति नैे संक्रमणको सम्भावना ठूलो हुन्छ भनेर सबैले बुझ्नुपर्छ ।
उद्धारका क्रममा कोही पनि लुकेर भाग्न सक्दैन । किनभने चीनको विमानस्थलमा सबैको पूर्ण स्वस्थ जाँच हुन्छ र कसैमा संक्रमण देखिएको खण्डमा उसलाई तुरुन्त अस्पताल लगिन्छ र उसले स्वदेश फर्किने अनुमति पाउँदैन ।
चीनबाट नेपाल फर्किएपछि विमानस्थलमै पुनः पूर्ण स्वास्थ जाँच गरिन्छ र संक्रमण देखिएको खण्डमा तुरुन्त अस्पताल लगिन्छ । संक्रमण नदेखिएको खण्डमा पनि घर जान नदिई क्वारेन्टाइनका लागि एउटा व्यवस्थित ठाउँमा १४ दिन निगरानीमा राखिन्छ ।
यति धेरै जाँचबाट हामी गुजि्ररहँदा कसरी कसैले हामीलाई ‘लिभिङ बाइलोजिकल बम’को संज्ञा दिन मिल्छ ? मिल्दैन ।
अहिलेको ‘लिभिङ बाइलोजिकल बम’ भनेको बिना रोकटोक र स्वास्थ जाँचबिना चीनका अन्य शहरबाट नेपाल भित्रिरहेका सबै मान्छेहरु हुन् । त्यसरी भित्रिरहेका नेपाली, चिनियाँ र अन्य बिदेशीहरुमध्ये कोही पनि संक्रमित भएमा नेपालमा कसरी कोरोना भाइरस फैलिन सक्छ भन्ने कुरामा नेपाल ध्यानाकर्षण होस् ।
खुल्लारुपमा नेपाल भित्रिसकेपछि यदि कसैले कोरोनाको लक्षण देखायो भने के गर्ने ? कोरोना भाइरस वुहानमा मात्र हैन, पुरै चीनमा फैलिएको भाइरस हो । सरकारले तुरुन्त चीनबाट नेपाल भित्रिने सबै मान्छेको कडा रुपमा स्वास्थ जाँच गर्नुपर्ने थियो । कतै ढिलो त भएन ? यो स्थिति कदापि नआओस् । नेपाल सरकार र जनताले वुहानलाई मात्र लक्षित गरी यिनीहरुलाई नेपाल भित्रिन दिनुहुँदैन नभनियोस् ।
वुहानलगायत हुबेई प्रान्तका सबै नेपालीहरु अहिलेसम्म संक्रमित छैनन् । त्यसैले हामी डराएका छैनौं । तर, यदि अब कसैलाई संक्रमण भैहालेमा हामी कति त्रसित हुन्छौं, विचार गर्नुस् । लाससमेत घरका मान्छेले हेर्न पाउँदैनन् ।
यो भाइरस ठीक हुन कम्तिमा पनि दुई/तीन महिना लाग्न सक्छ । अब हामी त्यत्रो समय थुनिएर त अवश्य बस्न सक्दैनौं । खानाको अभाव अवश्य हुन्छ । बाहिर निस्किनै पर्‍यो । अहिले त जसोतसो बसेकै छौं । तर, भविश्यलाई मध्यनजरमा राखेर सोचौं- हाम्रो अवस्था के हुन्छ ?
सबै मुलुकले यो कुरा सोचेरै आˆना जनताको उद्धार गरिसके । तर, हामीले कहिले बुझ्ने ? गर्मीसँग यो भाइरसको प्रकोप घट्ने तर्क आइराखेको छ । तर, के हामी अब गर्मी महिना कुरेर बस्ने ?
हामीलाई सरकारले तुरुन्त उद्धार नगरेकोमा दुःख लागेको छैन । न त जनताको विरोधले नै दुःख लागेको छ । दुःख लागेको चाँहि नेपालका विज्ञ डाक्टरहरुको तर्कहरुले हो । उनीहरुले त यसबारेमा राम्ररी बुझेर आफ्नो तर्कहरु दिनुपर्थ्यो ।
कोही भन्छन् नेपालले उपचार गर्न सक्दै, सक्दैन । कोही भन्छन्, चीनमै छाडेको राम्रो । कोही भन्छन् क्वारेन्टाइनमा राखेर केही काम लाग्दैन । र, कोही भन्छन् उनीहरु लिभिङ बाइलोजिकल बम हुन् । यी सब कुतर्क हुन् ।sorce
Previous रुई फुई कि दुई चाहिन्छ जाडाेमा ।
Next ओलीको स्टालिनपथ : मुटु छ भने नडराए हुन्छ !